हिन्दु, मुस्लिम र बुद्धिष्टहरुको पवित्र तीर्थस्थल 'लुम्बिनी' | Citizen Post News
हिन्दु, मुस्लिम र बुद्धिष्टहरुको पवित्र तीर्थस्थल 'लुम्बिनी'
महामानव सिद्धार्थ गौतम (भगवान ) बुद्धको जन्मभूमि लुम्बिनी विश्व बिख्यात छ । बिश्व सम्पदा सुचीमा सुचीकृत यस स्थलको यशगान मानव जीवनका लागि निकै उपयोगी छन् । महामाया रुपन्देही माताको शक्ति पीठको रुपमा विकसित देबीस्थल र यात्राको क्रममा जन्मेका बुद्धको जन्मस्थलले लुम्बिनीको ओजस्वी गाथा र महिमाको वर्णन दुर्लभ छ ।
रुपन्देही र लुम्बिनी दुई छुट्टाछुट्टै परिचय दिने शब्द हुन् । लुम्बिनी ग्रामको नाम हो भने रुपन्देही हिन्दुहरुको आराध्य देबीको नाम हो । लुम्बिनी ग्रामस्थित रुपन्देही माताको मन्दिरमा बुद्ध जन्मेर लुम्बिनीको महत्व र महिमा विश्व विख्यात भएको हो । बुद्ध जन्मस्थल भएकै कारण लुम्बिनीमा विश्वभरिबाट वर्षेनी हजारौ पर्यटक आउने गरेका छन् ।
शक्तिस्वरुपा रुपन्देही मातालाई स्थानीयले रुमिन्देई माई र लुम्बिनी माई आदि नामले पुज्दै आएका छन् । बुद्ध जन्मिनु पूर्बदेखि लुम्बिनी ग्राम नजिक रहेको यस पबित्र कानन (बगैचा) स्थित मन्दिरमा आदिशक्ति माता भगवतीको बास रहेको स्थानीय हिन्दुहरुको बिश्वास छ । आदिशक्ति रुपन्देही माताको मन्दिर रहेको लुम्बिनी ग्रामप्रति स्थानीयको आस्था र विश्वासका कारण यसको महत्व अझ् बढ्दै गएको हो ।
हिन्दु छोरीले पहिलो सन्तान गर्भस्थ रहेपछि माइतमा गई जन्म दिने चलन छ । राजकुमार सिद्धार्थ गर्भस्त रहेपछि पहिलो सन्तानलाई जन्म दिन मायादेबी तिलौराकोट दरबारबाट प्राचीन कोलिय दरबार देवदहमा रहेको माइतीघर जाने क्रममा यहाँ उनको जन्म भएको हो । बाटोमा पर्ने रुपन्देही माताको मन्दिर दर्शन गर्न जादा राजकुमार सिद्धार्थ जन्मेको आधार प्रमाणहरु प्रशस्त छन् । मायादेबी देवदहबाट बिदाई भई कपिलवस्तु जाने क्रममा यसै स्थानमा पहिलो सन्तानको रुपमा छोरा भाकल मागेकी थिईन् भन्ने स्थानीय भनाई छ ।
मौर्य सम्राट अशोक ई. पु. २ सय ४९ मा लुम्बिनी आईपुग्दा सो धार्मिक स्थलमा पुजाअर्चना हुदै गरेको प्रमाणले पनि धेरै कुराको पुष्ट्याई गर्दछ । अशोक लुम्बिनी आईपुग्दा सो मन्दिरमा हिन्दु पुजारीले पुजा गरिरहेको उल्लेख छ । त्यसताका पनि महामायाको सो स्थान देबीस्थलकै रुपमा पुजित रहेको प्रमाणहरु प्रशस्त छन् । यद्दपि लुम्बिनी बिकास कोषले केही वर्ष यतादेखि सो मन्दिरमा हिन्दु पुजारीलाई पूजा गर्न रोक लगाएपनि फुलपाती र धुपदीप दिने चलन अहिले पनि बिद्यमान छ ।
आफ्ना आध्यात्म गुरु उपगुप्तको मार्ग दर्शनमा लुम्बिनी पुगेका मौर्य सम्राट अशोक पनि सिद्धार्थ गौतम सोही स्थानमा जन्मेको चिनाउने जन्म स्मारक शिलाको पुजा गरेका थिए । लुम्बिनीका स्थानीयवासीले सो स्मारक शिलाको पूजा पहिलादेखि नै गर्दै आएका थिए । स्थानीयकै भनाईबाट सो शिला बुद्धको जन्म स्मास्क शिला भएकोमा अशोक प्रस्ट भएका हुन् । मौर्य सम्राट अशोकले सो स्मारक शिलाको पुजा आराधना पश्चात लुम्बिनी पुगेको चिनोस्वरुप अशोक स्तम्भ स्थापित गरेका थिए । जुन अहिले पनि देख्न सकिन्छ ।
प्रशव वेदना पूर्ब मायादेबी र जन्मेपछि राजकुमार सिद्धार्थलाई शुद्धिकरणका लागि नुहाइएको पोखरीको समेत अशोकले पूजा गरेको प्रमाण यथावत छन् । मन्दिर पस्नु पूर्ब शुद्धिकरण आवश्यक रहन्छ । त्यसैले देबीको दर्शन गर्न जानुअघि शुद्धिका लागि मायादेबी सो पोखरीमा नुहाएकी हुन सक्छिन् । प्रायः जहाँ पनि देव÷देबीस्थल नजिक पोखरी वा नदी हुने गर्दछ । यस मन्दिर नजिक तेलार नदी छ र छैवैमा देव निर्मित पोखरी पनि । यस अर्थमा यो स्थल बुद्ध जन्मिनु पहिलादेखि नै धर्मस्थलको रुपमा रहेको अनुमान गर्न सकिन्छ ।
रुपन्देही मातासित छोरो भाकल माग्ने चलनः
भगवान बिष्णुको दशौ अंश अवतारका रुपमा हिन्दुहरुले बुद्धलाई पूज्दै आएकोमा शंका छैन् । ई. पू. ६ सय २३ मा मायादेवीका कोखबाट लुम्बिनीमा उनको जन्म भएको हो । आदिशक्ति माता रुपन्देहीको आर्शिवाद र ईच्छा स्वरुप बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मेको स्थानीय दाबी पनि यथावत र तर्कपूर्ण छ । हिन्दु धर्मावलम्बी अझै पनि सो स्थानमा गई रुपन्देही माता सित छोरो भाकल माग्ने चलन छ । भाकलबाट छोरो जन्मिएपछि छोराको बिबाह पश्चात उसले बिबाह समारोहमा टाउकोमा लगाउने मउर (एक किसिमको बिशेष टोपी) बिबाह पश्चात त्यहाँ लगि चढाउने परम्परा बिद्यमान छ ।
विश्वका अन्य तीर्थस्थल जस्तै वर्षेनी लाखौ हिन्दुहरु दर्शन र पुजापाठका लागि लुम्बिनी आउने गर्दछन् । मागेको भाकल पूरा भएकोमा कथा कडाही, मुण्डन संस्कार र भजन कृतन समेतको आयोजन हुने गर्दछ । सुस्वास्थ्य, दीर्घायु र शान्तिको कामना सहितको हवन पूजनका धार्मिक दृष्टान्तले लुम्बिनीलाई वर्षभरि हिन्दुमय बनाएको हुन्छ । यिनै दृष्टान्त र धार्मिक कृयाकलापले लुम्बिनीलाई हिन्दुहरुको पबित्र तीर्थस्थलको रुपमा रहेको प्रमाण दिन्छ ।
स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण हुनु जरुरीः
लुम्बिनीको समुचित बिकासका लागि सब भन्दा पहिला स्थानीय भाषा र संस्कृतिको संरक्षण हुनु जरुरी छ । लुम्बिनीको विशेष संरक्षक त्यहाँका स्थानीय हुन् । स्थानीयको प्रयास स्वरुप हालको लुम्बिनी बिकसित भएकोमा दुई मत छैन् । लुम्बिनीको बिशेष संरक्षक मानिने खुनगाईका चैधरी परिवारबाट मनमोहन चौधरी लुम्बिनी साँस्कृति नगरपालिकाका मेअर पदमा निर्बाचित पनि भएका छन् । उनका पुर्खाले संरक्षित गरि राखेको लुम्बिनीप्रति उनको सदभाव कायमै छ । यसैगरि मुस्लिम समुदायबाट फकरुद्दीन मुसलमानलाई क्षेत्रको प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्बाचित गरेर लुम्बिनीबासीले शान्ति र शौहार्दताको परिचय दिएका छन् । यसलाई लुम्बिनीबासीले गर्व र अवसरका रुपमा लिनु पर्दछ ।
बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी छ र स्थानीयको गौरवले विश्वमा शिखर चुमेको हो । लुम्विनीको ओजश्वी गाथा र बुद्ध जन्मस्थल भएकै कारण लुम्बिनीका स्थानीयवासी विश्वमा पूजित छन् । स्थानीय मात्र होइन यहाँको माटो समेत विश्वमा पूज्यनीय छ । बिश्वभरबाट वर्षेनी लाखौं भक्तजन लुम्बिनी दर्शन र अध्यात्म प्राप्तिका लागि आउने गर्दछन् । प्रो.केन्जो टाङ्गेद्वारा तयार पारिएको लुम्बिनी बिकासको गुरुयोजना पनि उत्तिकै आकर्षक छ । यहाँ ४२ राष्ट्रका आफ्नै बिहार पनि तयार छन् ।
विश्वको साझा सम्पत्ति लुम्बिनीः
लुम्बिनी विश्वसम्पदा सुचीमा सुचिकृत छ । यो सम्पूर्ण विश्वकै साझा सम्पत्ति हो । विश्वमा शान्तिको मुहानको रुपमा लुम्बिनीको आफ्नो परिचय स्थापित छ । शान्तिका अग्रदूत एवम् एशियाको ताराको रुपमा बुद्धको आफ्नो परिचय बिस्तारित छ । अहिलेको अवस्थामा आपसी द्वन्द्व, कलह र युद्धबाट आजित विश्वजगत शान्तिकै खोजीमा छ । त्यसैले प्रत्येक शान्ति मार्गी लुम्बिनी पुग्नै पर्ने हुन्छ । यसकारण पनि विश्व आस्थाको केन्द्र लुम्बिनी विकासको मार्ग प्रसस्त रहेको देखिन्छन् ।
लुम्बिनी क्षेत्रमा सदियौदेखि हिन्दु र मुस्लिमहरुको सौहार्दपूर्ण बास छ । यहाँका हिन्दु र मुस्लिमहरु बिच आपसी भाईचाराको सम्बन्ध उदाहरणीय छन् । सदियौदेखि यहाँका हिन्दु र मुस्लिम मिलेर लुम्बिनीको संरक्षण प्रवर्धन गदै आएको सर्बबिदितै छ । दुबै समुदाय आफ्नो ऐतिहासिक, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक धरोहर लुम्बिनीको बिकास कार्यमा सघाउन तयार पनि छन् । भनिन्छ, 'एक थुकी सुकी, सय थुकी नदी' । यो लुम्बिनी बिकासको लागि अर्थपूर्ण आधार हो ।
यहाँका समतल भूमि, हरिया बन, नदीका मनोरम किनारा र लहलहाउदा खेतका फाँटहरु प्रकृतिप्रेमी पर्यटकलाई आकर्षण गर्न आतुर छन् । मृदुभाषी स्थानीयको अवैतनिक सुरक्षा पहराले पर्यटक लोभ्याउन कुनै कसर बाँकी राखेका छैनन् । वर्षभरि पाईने हरिया तरकारी, मिठा र वासनायुक्त स्थानीय शुद्ध चामलको भात एकै साथ स्वादपान गराउन सक्ने सामथ्र्य लुम्बिनीसँग छ । यहाँ पाईने विश्वका दुर्लभ चराचुरुङ्गीको मनोरन्जक दृष्य, प्रेमका प्रतिक सारस पंक्षी पर्यटक लोभ्याउन कम छैनन् ।
लुम्बिनी कृषिका लागि उर्बर भूमि भएको क्षेत्र हो । यहाँका किसान आफ्नो पसिनाबाट धर्तीको सीना (छाति) चिर्दै देशको लागि खद्यान्न भण्डारण गर्दछ । युवाहरु रोजगारीका लागि दुबई, कतार, मलेशिया र छिमेकी मुलुक भारतको बिभिन्न प्रदेश र सहरमा आफ्नो शरिरको खून बेच्दै देशका लागि रेमिटान्स भित्र्याउदै छन् । देशको अर्थब्यवस्था सुदृढ पार्दै आफ्नो उन्नति र प्रगति चाहने यहाँका युवा/किसानहरु आफ्नै भूमि बिकास र समृद्धिका धाराबाट सिञ्चित गर्ने अवसर पाए समृद्धिले शिखर चुम्ने निश्चित छ ।
सम्वाद, सहकार्य, सहिष्णुता र शान्ति यी चार बीजमन्त्र सबै समुदाय, धर्म, सम्प्रदायलाई जोड्ने आधारस्तम्भ हुन् । यो लुम्बिनीको उन्नति र प्रगतिको सर्बोत्तम मार्ग पनि हो । समयको सम्मान, कार्यस्थलको सम्मान, विषयको सम्मान, एक अर्काको सम्मान र समान सहभागिताले शान्ति र सद्भाव कायम रहनेमा दुइमत छैन् । यिनै आधारभूत शन्ति र सद्भावका बीज तत्वलाई आत्मसात गरेर संवाद र सहकार्यको माध्यमबाट सबैको समान सहभागितामा लुम्बिनीको सम्मान र उत्थान हुने छ ।
बिष्णुको दशौं अंश अवतारका रुपमा बुद्ध जन्मेको मानिन्छः
जहाँ बिष्णुको दशौ अंश अवतारका रुपमा बुद्ध जन्मेको मानिन्छ, हिन्दुहरुका लागि राम जन्मभूमि अयोध्या र कृष्ण जन्मभूमि मथुरा जस्तै लुम्बिनीको महत्व विशेष छ । त्यसैले बिष्णुको दशौ अंश अवतार मान्ने हिन्दु, आफ्ना धर्म प्रवर्तक शाक्य मुनिको जन्मभूमि ठान्ने बुद्धिष्ट तथा लुम्बिनीको सुरक्षा र बिकासमा विशेष योगदान रहेका स्थानीय मुस्लिमहरु एकजुट भई मिलेर लुम्बिनीको संरक्षण प्रर्वद्धनमा लाग्नु पर्ने आजको आवश्यकता हो । आपसी सौहार्दता र भाईचाराको सम्बन्ध बिस्तार गर्दै लुम्बिनी बिकासको लागि यो नै सबै भन्दा उचित, भरपर्दो र सार्थक अवसरका हो ।
विश्व शान्तिका मुहान महामानव भगवान बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी आफैंमा बिकासको लागि प्रशस्त शाधनको श्रोत हो । विश्वमा बढ्दो बुद्धका अनुवायी, लुीम्बनीप्रति सबैको साझा धारणा, बिकासका लागि स्थानीयको चाहना, सरकारको बिकास गर्ने प्रतिवद्धता आदिलाई बहुउपयोगी रणनीतिको आधार बनाउन सकिन्छ । लुम्बिनी अझ पनि बिकासको क्रममै छ तर विगत केही समयदेखि जसरी स्थानीयवासीको आस्थाको रुपमा पौराणिक कालदेखि मान्यतामा रहेको आदिशक्ति रुपन्देही माताको बिकासक्रम ओझेलमा पर्दै गएको छ । यसले स्थानीयवासीलाई चिन्तामा पारेको अवस्थामा पुर्याएको छ तर पनि यो आवाज नसुनिएको स्थितिमा छ ।
यहाँका स्थानीय मुस्लिम समुदाय पनि उपेक्षित छन् । केही वर्ष पहिला भारतको बोधगयामा आतंकवादी बिष्फोटपछि ती समुदायलाई शंकाको दृष्टिले हेर्ने दुस्साहस गरेको भान हुन्छ । जसले लुम्बिनीमा हिन्दु, मुस्लिम र बुद्धिष्टको एकतालाई कमजोर बनाएको छ । यस गतिले निरन्तरता पाइरह्यो भने स्थानीयवासीको आस्थाको केन्द्रको रुपमा रहेको आदिशक्ति रुपन्देही माताको पहिचान गुम्नेछ । जसले स्थानीयवासीको लगाव विस्तारै कम हुदै जानेछ, जो लुम्बिनीको महिमाका लागि घातक हुनेछ । (लेखकः स्थानीय सूचनाको हक अधिकारकर्मी एवम् सञ्चारकर्मी हुनुहुन्छ ।)